DHEGEYSO-Mid kamid ah masaajidada magaalada Muqdisho oo hub lagu qabtay. – Radio Daljir
DHEGEYSO-Mid kamid ah masaajidada magaalada Muqdisho oo hub lagu qabtay.
Luulyo 8, 2016 12:42 b 0
(July 08 2016)-Ciidanka booliska ee dowladda Soomaaliya ayaa gacanta kudhigay hub iyo shaqsiyaad gacanta kuhayey oo kusugnaa mid kamid ah masaajidda kuyaal degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir.
Taliyaha Ciidanka Boliiska Saldhigga degmada Yaaqshiid Maxamed Yuusuf Nuur iyo taliyaha qaybta Booliska gobalka Banaadir Gashaanle Sare Bishaar Abshir Geeddi, ayaa sheegay in Hubkaasi uu ahaa mid qeyb ka ah dilalka iyo amni darada ka dhacda magaalada Muqdisho.
Xiisado u dhexeeya maamulka gobolada dhexe iyo Galmudug oo ka taagan gobolka Galgaduud.
DHEGEYSO-Barnaamijkii Caawa iyo Daljir Xarunta Buuhoodle 08 07 2016.